SolidWorks 2008 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Win Win "​အစ်​ကို​ရေ SolidWorks 2008 software & crack file ​လေး ​ရှိ​ရင် ​လုပ်​ပေး​ပါ​ဦး . ​ကျွန်​တော့် ​အ​တွက် ​အ​ရမ်း​အ​ရေး​ကြီး ​နေ​လို့​ပါ ."
​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​ပြီ . ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် . ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ .. ​ကျွန်​တော် ​တစ်​ခု ​ထပ်​ပြော​ပြ​ချင်​ပါ​တယ် . ​ဒါ​က​လဲ crack (​သို့) keygen ​တွေ​ကို ​ပေး​တိုင်း​ပြော​ပြော​နေ​ရ​တဲ့ ​စ​ကား​ပါ . antivirus program ​တွေ​ဟာ crack (​သို့) keygen ​တော်​တော်​များ​များ​ကို virus ​လို့​ပဲ ​သိ​ထား​ကြ​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒီ့​အ​တွက် crack (​သို့) keygen ​တွေ​ကို​ထည့်​မယ်​ဆို​ရင် ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​မိ​မိ​တင်​ထား​တဲ့ antivirus program ​တွေ​ကို ​ခ​ဏ​ပိတ်​ထား​ပေး​ပါ . ​ပြီး​မှ​တင်​ပါ . ​သိ​ပြီး​သား​လူ​အ​တွက် ​ကိ​စ္စ​မ​ရှိ​ပေ​မယ့် ​မ​သိ​သေး​တဲ့​သူ​များ​အ​တွက် ​ကျွန်​တော်​တင်​ပေး​တဲ့ ​ဖိုင်​တွေ​ဟာ virus ​ပါ​တယ်​ဆို​ပြီး ​ပြော​ပြော​နေ​ကြ​လို့ ​ထပ်​ပြီး​သ​တိ​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ . ​ကျွန်​တော် ​ဘယ်​တော့​မှ virus ​ပါ​တဲ့ ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​ဒု​က္ခ​ခံ​ပြီး ​မ​တင်​ပေး​ပါ​ဘူး .
HEIN June 11, 2013 at 6:21 PM
Solid Work 2008 ​က​ဒေါင်း​မ​ရ​တော့​ဘူး​ဗျ